फेरी घट्यो सुनको मुल्य, तोलाको कति ? - सिम्रिक खबर
हुन्डाईको आई२० कार बन्यो २०२१ को ‘इन्डियन कार अफ द इयर’ प्रधानसेनापति थापाले लगाए कोरोनाको खोप इरानले अमेरिकाले प्रतिबन्ध नहटाएसम्म आणविक सम्झौता सम्बन्धी वार्ता समेत नगर्ने डोनाल्ड ट्रम्पले नयाँ पार्टी नखोल्ने स्पष्ट पारे मार्चमा नाइन आर फोन र स्मार्टवाच सार्वजनिक गर्दै वानप्लस क्यानले आगामी चैतमा अर्को महिलाको टी-२० प्रतियोगिता आयोजना गर्न
फेरी घट्यो सुनको मुल्य, तोलाको कति ?
काठमाडौँ । सोमबार स्थिर रहेको सुनको भाउ आज घटेको छ । मंगलबार सुनको भाउ तोलामा ३०० रुपैयाँले घटेको हो । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले आज छापावाला सुन प्रतितोला ९५ हजार ८०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला ९५ हजार ३०० रुपैयाँ तोकेको छ। यसैगरी, चाँदीको भाउ पनि मंगलबार तोलामा १० रुपैयाँले घटेर प्रतितोला एक हजार ३१० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। यस अघि आइतबार चाँदीको भाउ प्रतितोला एक हजार ३२० रुपैयाँमा खरिदबिक्री गरिएको थियो।
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पनि सुनको भाउमा निरन्तर गिरावट आएको छ। मंगलबार प्रति अउन्स एक हजार ९२६ डलरमा सुन खरिदबिक्री भइरहेको छ। यस्तै, चाँदीको भाउ मंगलबार प्रति अउन्स २६ डलर बराबारमा कारोबार भइरहेको छ। करिब एक बर्षदेखी सुनको मूल्यमा निरन्तर उतारद्धढाव आइरहेको छ । मूल्य घटबढ भएपनि सुनको कारोबार भने ठप्प छ।
इरानले अमेरिकाले प्रतिबन्ध नहटाएसम्म आणविक सम्झौता सम्बन्धी वार्ता समेत नगर्ने